एमाले लेखा आयोगको अध्यक्षमा डा.कँडेलको ह्याट्रिक ! - Arthatantra.com
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३० वर्ष प्राध्यापन गरेका कँडेल केपी ओली नेतृत्वको पचिल्लो सरकारमा ३९ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । लेखाआयोग नेकपा एमालेको आर्थिक अनुशासन कायम गराउने शक्तिशाली आयोग हो ।
यसले पार्टीको आर्थिक अनुशासन र नियमनकारी निकायको भुमिका निर्वाह गर्दछ । पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनबाट आयोगको सुरुवात भएको हो ।
दशौ महाधिवेशनमा आयोगको उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी , सचिवमा शिव अधिकारी र सदस्यहरुमा क्रमशः इश्वरी प्रसाद खरेल, कोमल भट्टराई, खटक बहादुर (पिबी) गोले, खम्ब बहादुर खत्री, घनेन्द्रराज घिमिरे, धन बहादुर विश्वकर्मा, भिमलाल पौडेल, मस्त बहादुर गरन्जा, मिनराज कडेँल, राजकिशोर यादव, रेवतीरमण शर्मा, शंकर बहादुर कार्की खुल्लतर्फ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
वि.सं.२०७८ मंसिर १३ सोमवार १८:४१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे एक सातामा नै बाणिज्य बैंकहरुबाट ६ अर्ब निक्षेप गायव !
पछिल्लाे सहिद स्मारक लिगको तेस्रो र चौथो चरणको तालिका सार्वजनिक